Real Madrid oo ka gashay kaalinta 22-aad liiska kooxaha ugu weerarka xoogan ee Yurub – Gool FM
(Madrid) 04 Nof 2019. Kooxda Real Madrid ayaa ku nool dhibaato weyn ee dhanka weerarka ah xilli ciyaareedkan, inkastoo ay heysato ciyaartoy dhowr ee heer sare ku ah dhanka weerarka, balse waxay ku fashilmeen inay shabaqa gaaraan 4 kulan ee isugu jira horyaalka La Liga ee dalka Spain iyo tartanka Champions League.
Haddaba wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa wuxuu daabacay warbixin uu ku muujinayay heerka dhibaatada Real Madrid ka heysata dhanka gooldhalinta, kaddib bixitaankii xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo kaasoo dhalin jiray 50 gool xilli ciyaareedkii.
Laakiin Los Blancos ayaa waxay xilli ciyaareedkan dhalisay 24 gool oo kaliya ee isugu jira horyaalka La Liga ee dalka Spain iyo tartanka Champions League, kaddib 209 shuut ay ku tuureen dhanka goolka.
Sheeakada intaas oo kaliya kuma koobna, Real Madrid ayaa waxay kaga jirtaa kaalinta 22-aad ee liiska kooxaha ugu weerarka xooga horyaalada waaweyn ee Yurub, waxay dhaliyeen 24 gool 14 kulan oo ay ciyaareen, celi celis ahaan waxay gool dhaliyeen 53-dii daqiiqaba mar, iyadoo ay jiraan 21 kooxood qaarada Yurub ah ee dhaliyay goolal intaas ka badan.
Si aan u aragno sida ay u xun yahay rikoorrka dhanka weerarka ee kooxda Real Madrid xilli ciyaareedkan, waxaan eegi karnaa in Manchester City ay dhalisay 44 gool, taasoo ka dhigan inay dhaliyeen in ka badan 20 gool naadiga Los Blancos, waxayna cel celis ahaan 29-kii daqiiqaba ay dhaliyeen gool.